Ulo oru nkuku na ulo oru mmeputa -Retool
N'elu Ọgwụ Parts
Oollọ ọrụ Retool nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 26 ọhụụ na nkenke zuru oke.
Oollọ ọrụ Retool na-ekwusi ike na mmepe sayensị dị ka nkwalite, ịdị mma na ihu ọma dị ka isi mmalite. Anyị na-achọ ezigbo mma kredit guzo ọtọ, ogo klaasị ụwa na ọrụ adịchaghị. Anyị ji obi anyị na-achọ na-akwado ndị mba ọzọ na anụ ụlọ ndị enyi na ngalaba-ike mara mma ga-eme n'ọdịnihu.
Anyị nwere ike igba na igwe dị iche iche iche iche nke ngwaahịa dị ka drawings ma ọ bụ n'omume ahịa supply.Casting nkenke dị elu, na àgwà bụ anụ.
Oollọ ọrụ Retool bụ onye ọrụ a tụkwasịrị obi na ụlọ ọrụ nkedo. Anyị na-egosipụta ntụkwasị obi a ma jiri ihe ọmụma anyị dabaa na ihe nkedo gị. Ndị injinia anyị nwere ahụmịhe niile nke ụlọ ọrụ mgbatị. Anyị na-enyekarị ihe kachasị mkpa maka ịdị mma ma anyị na-achịkwa usoro mmepụta ọ bụla dịka ISO9001 si dị.
Ndị na-akụ ihe ọkụkụ
Rewghasa N'ihi Meat grinder Machinery
Shijiazhuang Retool igwe anaghị agba nchara Products Co., Ltd. guzobere na 1994.Retool chọtara na Xinzhaidian Industry Area, Shijiazhuang obodo, na-adaba adaba njem na elu ọnọdụ. Retool Company specializes na imewe na imewe nke nile di iche iche nke valvụ na mmepụta nke ulo oru mbo mgbatị akụkụ na ígwè ọrụ akụkụ.